Ny Hisense D6 miaraka amin'ny bateria 5400 mAh dia efa nohamarinin'ny TENAA | Androidsis
Hisense, miaraka amin'i Vivo, dia mpamokatra sinoa izay mampiditra finday matetika ny sehatra TENAA. Mijanona eo amin'ny tsenan'ny smartphone hatrany izy io indraindray ary ny zava-baovao farany dia ny F30S, terminal izay hanomboka tsy ho ela amin'ny sehatra finday Tiger T310.
Fa izao kosa dia manasongadina fitaovana vaovao iray izahay, fitaovana iray izay henjana ary voatanisa ao amin'ny lampihin'ny TENAA, ilay rafitra mpanara-maso sy manamarina sinoa. Nipoitra tao amin'ny tahiry izany Hisense D6, ary ny tena mahagaga dia ny batterie goavambe ampiasainy.
Ny Hisense D6 dia telefaona mpitatitra manana endrika mahery sy fanoherana. Noho izany, antenaina fa ho eo am-pelatanan'ny mpanjifa izy hiatrika ny karazana fitsapana tafahoatra, ary koa ny hatairana, hovitrovitra ary fanararaotana hafa. Na izany aza, tsy ilaozany ny hatsarana kanto, satria, araka ny hita amin'ny sariny, na dia tsy ny endriny indrindra aza ny endriny ary manana hateviny sy lanjany mihoatra ny salanisa, dia aseho azy fa safidy manaitra .
Araka ny nambaran'ny TENAA momba ny famaritana an'ity finday mikitoantoana ity, Izy io dia manana efijery diagonaly 5.99-inch miaraka amina FullHD + vahaolana 2,160 x 1,080 teboka, fakantsary selfie 16 MP, fakan-tsary 12 MP ao aoriana, ary scanner an'ny dian-tànana nitaingina ny lamosiny, eo ambanin'ny tselatra LED.
Ao anaty ao anatiny no misy a 1.8 GHz octa-core SoC ary 3/4/6 GB RAM miaraka amin'ny fitadidiana anatiny 64/128/256 GB, arakaraka. Ho setrin'izany, mirehareha amin'ny batterie manana fahaizana 5,400 mAh izy, izay hanome antsika fahaleovan-tena maharitra roa andro tsy misy sarany, azo inoana.
Hisense Inifinity H12: Fitaovana mandanjalanja sy famolavolana manintona [Famerenana]
Amin'ny lafiny iray, milanja 235 grama ary mirefy 167.8 x 81.3 x 12.3 milimetatra, ankoatry ny maha-ao anaty safidy mainty ihany. Ho setrin'izany, somary mandiso fanantenana ihany, mandeha amin'ny Android 8.1 Oreo izy io. Tokony holazaina ihany koa fa ny daty famoahana azy sy ny fisian'ny ary ny antsipirian'ny vidiny dia mbola tsy naseho. Manantena an'ity data ity izahay sy ny fampahalalana bebe kokoa momba ny Hisense D6.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Hisense D6 dia smartphone henjana vao voamarina miaraka amin'ny bateria 5400 mAh sy maro hafa
Total Party Kill dia sehatra vaovao manaitaitra anao amin'ny doka